A place to say something: မြန်မာ Blog ရေးသူများ
ကျွန်တော် Blog ရေးတာ သိပ်မကြာလှသေးပါ.. တစ်ယောက်တည်းနေရတာ အလွန်ပျင်းရိဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်.. တစ်စုံတရာသော ခံစားချက် အကြောင်းအရာကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်လိုခြင်းသည် တကိုယ်တည်းနေထိုင်လေ့မရှိသည့် လူတို့၏ သဘာဝပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်း မကျွမ်းကျင်သည့် အပြင် စာရိုက်လည်း မကျွမ်းကျင်သော ကျုပ်အဖို့ Blog ရေးသောအလုပ်သည် အမှန်တကယ် ပင်ပန်းပါသည်။ မှားတာသိပါသည်။ မှန်တာမသိ၍ ဆက်လက်မှားပေဦးမည်။ ခွင့်လွှတ်ရန်မလိုပါ။ အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာရေးဆရာ မဟုတ်ပါ။ ရေးချင်တာရေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မတိုက်ဆိုင်အောင်ရေးပါမည်။ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
Blog ဖတ်ခြင်းသည် ဗဟုသုတကို တိုးစေပါသည်။ ဖတ်ဖူးသမျှ မြန်မာ Blog များထဲတွင် စာရေးကောင်သူ Blogger တစ်ဦးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။ ညီလင်းဆက် ဟု သိရပါသည်။ ကောင်းသည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ပိုင် စိတ်တိုင်းကျမှု ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ စိတ်ခံစားမှုသည်လည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသူ၏ Blog Site ထဲတွင် အခြား မြန်မာ Blog ရေးသူများကို သွားရောက် ဖက်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဤ Link ကို Click လုပ်ဖြင်းဖြင့် ညီလင်းဆက်၏ Blog ကို သွားရောက် ဖက်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by ko ye at 10:46 PM
Labels: ၀တ္ထုတို, Myanmar
Thanks for your comment! Happy to see interesting, and nice writing Myanmar Blog again. Pls keep going on.
Thanks for your comment too. :)